မှတ်ချက်။ Wheat Starch နှင့် Tapioca Flour ကို CityMart ဂျုံတန်းမှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပုဇွန် ဘော်ကျိစ် – ၃၀၀ ဂရမ်
ဆား- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ခနောကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ၁ပုံ
နှမ်းဆီ – လက်က်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံ
ကော်မှုန့် (corn flour) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် (Wheat Starch နဲ့ Tapioca ဂျုံ)ကို သမအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ ရေ(၁ရ၀ မီလီလီတာ)၊ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ကို ထည့်ကာ တူ(တစ်စုံ)ဖြင့် ဒိုးကို နာနာနုယ်ပေးပါ။ ဒိုးအနေထားသည် ချောမွတ်သော အနေထားတွင် ရှိနေရမည်။
၃။ ပြီးလျှင် ဒိုးသားများကို ၁၀ ဂရမ် အလုံးသေးများ လုံးပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် အလုံးများကို ဒလိမ့်တုံးဖြင့် အ၀ိုင်းသဏန် လိမ့်ပေးပါ။ ဒလိမ့်တုံးတွင် ဂျုံသားများ မကပ်အောင် ပလတ်စတစ် အကြည်ခင်းပြီမှ လိမ့်ပေးပါ။
၅။ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ဒိုးပြားကို အဆင့်ဆင့် ပုံဖော်သွားပါ။
၆။ ထို့နောက် ပုဇွန်ကို (ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ နှမ်းဆီ၊ ကော်မှုန့်) တို့ရောနုယ်ပြီ ထည့် အစားသွပ်ပေးပါ။
ရ။ အစားသွပ်ပြီလျှင် ဒုိုးသားအပေါ်ကို လက်ဖြင့် ပိတ်လိုက်ပါ။
၈။ ထို့နည်းအတိုင်း ကျန်ပုဇွန်များကို ပုံဖော်ပြီ အစားသွပ်ပေးပါ။
၉။ ပေါင်းအိုးဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့်ပေါင်းပေးပြီ နိုင်လွန်ပုဇွန်ကို ပူပူနွေးနွေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Win Htin Ko Ko says:
Ma Wutyee, you areagreat chef as well asaculinary teacher to me. One thing I want to request you is that please try to developachannel on YouTube because seeing is better than reading in this art of cooking … I know you’re alreadyagreat chef … Reading your cooking recipe really help mealot all the time, but I would like to see your channel on YouTube that is better for us, beginners in culinary skill 🙂
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည် နောက်ပိုင်း Youtube ကနေ ဟင်းချက်နည်းတွေ လွှင့်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အားပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်.. 😀
Pearl Phyu says:
တခြား ဒင်းဆမ်း လုပ်နည်းတွေလည်း ကြိုးစားတင်ပေးထားပါတယ်.. ချက်ပြုတ်နည်းများမှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါနော်
ွှThandar Kyaw says:
Wheat Strach ဆိုပြီ ရှာလို့ရတယ် ညီမ… City Mart မှာ ဂျုံတွေ ရောင်းတဲ့ အတန်းမှာ ရောင်းတယ်
Wheat Strach ကို ဗိုလ်အောင်ကျော်အောက်ဆုံးဘလောက်က Royal Market မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်..
ဂျုံနုယ်တဲ့အခါ တူနဲ့ ကြာကြာလေး နုယ်ပေးပါ။
နိူင်လွန်ပုဇွန်ကို ကျွန်တော်လည်း အားရင် လုပ်စားလိုက်ပါဦးမယ် အမရယ်… အမ website ထဲ ၀င်ကြည့်ရင် သရေကျစရာတွေချည်းဘဲ… ထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ laptop ကြီးကိုတောင် ကောက်ဝါးချင်လာပြီ… 😀
( မမ၀တ်ရည်အစားပြောပေးတာ) 😛
dim sum လုပ်နည်းလေးတွေ မျှော်နေဦးမှာနော်…
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အားတာနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်
ဟင်းချက်နည်းကို ပရင့်တွေလဲ တော်တော်များများထုတ်ပီးနေပီ…တော်တော်များများလဲ ချက်ပီးနေပီ…
အရည်သောက်မပါရင် ထမင်းမစားတတ်လို့ အရည်သောက်ချက်နည်းလေးတွေ တင်ပေးပါဦးနော်…:)ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..မ၀တ်ရည်ရေ…:D
နောက်ပိုင်းကျရင် ဟင်းချိုချက်နည်းလေးတွေလည်း ကြိုးစားပြီ တင်ပေးသွားပါ့မယ်
၀တ်ရည်ရေ ကျေးဇူး အရမ်းတင်ရပြီကွယ်… စားအုံးမှာ စိတ်ချ တူနာ ပန်ကိတ်လုပ်စားဖြစ်တယ် အိမ်က လူတွေလားအုံး သားသားကစ ကြိုက်ကြတယ် ထမင်းပေါင်းလည်းလုပ်ပြီးပြီ မအိက မျှစ်မထည့်ဖူးဘူး ထည့်ကြည့်တော့ မွှေးသားပဲနော်… ကျေးဇူး
အမကအရမ်းတော်တာပဲ။သမီးတို့လိုဝါသနာပါသူတွေ အတွက်တော့ သိခွင့်ရတာအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
You r so welcome sis 😛
Blackie Chefie (R.Ka Wynn Htut) says:
အမ Wheat Starch (or) Wheat Flour က ကော်မှုန့်ကိုပဲပြောတာလားမသိဘူး…
အဲ့လိုကြည်ကြည်လေးဖြစ်အောင်တော့ လုပ်တတ်တယ်..အခုလို နည်းစနစ်ကျကျ ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူး
အဲ့ဒါကြောင့် Wheat Starch (or) Wheat Flour ဆိုတာ ဂျုံကော်မှုန့်ကိုပြောတာလားမသိဘူး…. ပြောပြစေချင်ပါတယ်… 🙂 Thanks u so much!! for recipe 🙂
ဟုတ်။ ကော်မှုန့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်လွန်ပုဇွန်၊ chinese dumpling တွေမှာ Wheat Starch ကိုသုံးတာ။ Wheat starch လို့ City Mart မှာမေးဝယ်ရင် အလွယ်တကူ ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်လွန်ပုဇွန်ပုံလေးတွေလည်း အထုပ်မှာ ပါပါတယ်။
ကောင်းတယ် ( အရမ်းကောင်းပါတယ် )
နောက်ထပ် ကျန်နေသေးတဲ့ Din Sun လေးတွေလည်း ဖေါ်ပြပေးအုံးနော်
မဝတ်ရည်ရဲ့ ဖြူစင်မေတ္တာ စေတနာကို အမြဲလေးစားနေပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ ဒင်းဆမ်းလုပ်နည်းသစ်လေးတွေ ဆက်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ
တော်လိုက်တဲ့ ဝတ်ရည်လေး 😀
မခင်ယမုံ၊ အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါနော်။ အရမ်းမခက်ပါဘူး၊ လုပ်သားကျသွားရင် လွယ်သွားရော… ကျေးဇူးပါ
in stead of gram or ounce
,i want to know the measurement with cup or spoon and for water or liquid pl shown as cup instead of liter
ဟင်းချက် အချိန်အတွယ် တွေကို ဒီလင့်မှာ http://www.wutyeefoodhouse.com/?page_id=4254 ကြည့်နိုင်ပါတယ်
I already tried many of yrs and mostly are ok.
For this prawn dimsum still the outer isalittle bit hard.Not like the ones made by the chinese done it.
for me yr web site is the one which i always and everyday look at it.
ွှTopica ဂျုံနဲ့ ပြောင်းလုပ်ကြည့်ပါ. ၀တ်ရည် လုပ်တဲ့ နိုင်လွန်ပုဇွန်က ဆိုင်ကအတိုင်းပဲ စားလို့ကောင်းတယ်။ အမြဲအားပေးလို့ ကျေးဇူးးပါနော်.. 🙂
မ၀တ်ရည်ရေ ကျွန်တော်က ဟင်းချက်ရတာ ၀ါသနာအရမ်းပါတယ်ဗျ … တော်ရုံအိမ်မှာချက်တဲ့ဟင်းလောက်တော့ အေးဆေးပဲ.. ဟဲဟဲ (ကြွားပြီ) … ခုလို ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံလေးတွေကို လေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက် မ၀တ်ရည်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ
အွန်လိုင်းမှာတော့ လေ့လာလို့ရတာမှန်ပေမယ့် … ခုလိုမျိုးတော့ ဖတ်ရတာ ဘယ်လွယ်ကူပါ့မလဲ.. ကိုယ်မှ အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်နိုင်တာ… အချိုပွဲလုပ်နည်းတို့ .. အင်္ဂလိပ်လို ဘာတဲ့ အက်ပီတိုက်ဇာ ဆိုလား အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ ရှိရင်လည်း ရှဲပါဦးလို့ … အမြဲအားပေးနေတယ်နော….
appetizer လုပ်နည်းတွေရော၊ အချိုပွဲ လုပ်နည်းလေးတွေပါ တင်ပေးပါ့မယ်. ကျေးဇူးပါ
Kyaw jee says:
ဂျုံအခွံသားက မာပြီး ကြည်ကြည်လေးလဲ
Wheat starch လဲ သေချာပါတယ်
နာရီဝက်လောက်ပေါင်းလဲ မာတာတာ ဘဲ
Wheat Starch နဲ့ Topical Flour နဲ့ ရောပြီ လုပ်ရမှာပါ။ ရိုးရိုးဂျုံနဲ့ ရောလုပ်ရင် မာသွားတတ်ပါတယ်.. Plz try again :0
နောက်ရက်လခထုတ်ရက် အလုပ်နားရက်မှ စမ်းတော့မယ်
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ။ ပုဇွန်က ဘော်ကျိစ်ပုဇွန်လေးတွေပဲ ထည့်ရမှာပါ။ ပြီတော့ နိုင်လွန်တစ်ခုကို တကောင်ဆိုရင် ရပါပြီ
Wheat Starch နဲ့ Topical Flour နဲ့ ရောပြီ လုပ်ရမှာပါ။ ရိုးရိုးဂျုံနဲ့ ရောလုပ်ရင် မာသွားတတ်ပါတယ်.. Plz try again 🙂
[…] နိုင်လွန်ပုဇွန် […]
ညီမရေ topical flour က၀ယ်လို့မလွယ်ပါ။ လိုက်ရှာတာလည်းမတွေ့ဘူး။ wheat starch (အစား) wheat flour (or)Self raising flour ဆိုရင်ကောမရဘူးလား။ topical flour ၀ယ်လို့မရရင်သူ့အစားဘာထည့်လို့ရမလဲ တစ်ချက်ပြောပြပါနော်။
Wheat Flour က ရှာလို့လွယ်ပါတယ်။ နိုင်လွန်ပုဇွန်ပုံလေးတွေနဲ့ City Mart မှာ ရှိပါတယ်။ Topical flour အစားတော့ ပေါက်စီလုပ်နည်း Super lite flour ကို အစားသုံးလို့ရပါတယ်
ဒိုး အတွက်တစ်ခြားဂျုံနဲ့လုပ်လို့အဆင်ပြေသလား၊ ကျနော်တို့နေတဲ့နေရာကCity Mart အရှိဘူးလေ။
တခြားဂျုံနဲ့လုပ်ရင် မာတယ်။ နိုင်လွန်ပုဇွန် လုပ်တဲ့ ဂျုံက နူညံ့တယ်။ မတူဘူး
Khine Oo says:
I like this nylon prawn very much. Now I got the method. On holiday ,I’ll try it and later reply my experience ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် dim sum သင်တန်းရှိရင်လဲပြောပါဦး လာတက်ချင်လို့ပါ
Dim sum သီးသန့် Mr.Cook မှာ သင်ပါတယ်..
tapioca flour နဲ့ corn flour ဘယ်ဟှာကို မြန်မာလို ကော်မှုန့်လို့ခေါ်တာပါလဲ။
Corn flour ပါ… 🙂
htet htet win says:
Dimsum မျိုးစုံလုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါဦးနော်။ တွဲဖက်စားရတဲ့အချည်စပ်နည်းလေးပါတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ မျှော်နေမယ်နော် ဝတ်ရည်ရေ။ အသစတင်တဲ့ ဟင်းတွေကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲ ဝတ်ရည်ရေ
kyi zin htut says:
ဒိုး လုပ်တာ အ ဆင် မ ပြေ လို့
တွဲ တွဲ ကြီး ဖြစ် ပြီး နယ် ရင် ပြတ် သွား တာ ဘာ လို့ လဲ အ ကြံ လေး ပေး ပါ အုံး
မနက်ဖြန် ချက်စားကြည့်မယ်နော် မ၀တ်ရည်ရေ အဲလို ဖက်ထုပ်ခေါက်တာ မလုပ်တတ်လို့ မ၀တ်ရည်လိုတော့လှလှလေးစားချင့်စဖွယ်ဖြစ်မယ်တော့မထင်ဘူး ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်
အမရေ ဂျုံကပြတ်ပြတ်နေတယ် အရွက်ဖြစ်အောင်လိမ့်လို့မရဘူး ရေကရေနွေးလား ရေပူပူလား ရေအေးလား ဖြေပေးပါနော်
ံHnin Lwin Aye says:
အစ်မရေTapioca Flour ကဘယ်မှာရနိုင်လဲ